[Nooca]: Nooca Nooca ah Foosha Nooca [Isticmaalka]: Xidho hubo qashin-baxa iyo hase, qiiqa baabuurta, jikada, iwm. [Hawlaha]: Sifeeyn ah ugu nadiifi dhammaan nooc walxaha hawada ku jira. [Waxaan haynaa shahaadooyin]: FDA / CE / Awooda qeyb ahaan ee NIOSH [Waqtiga]: wasakhaynta dhexdhexaad ah-40hours, Wasakheyn dhexdhexaad ah-30hours, Wasakhow culus-20hours, Wasakheyn daran-8hours. [note]: 1. Haddii maskuusku uu waxyeelloobo, qoyan yahay ama uusan si tartiib ah u neefsanayn, fadlan si dhaqso ah ugu beddelo maaskaro. 2. Ha bedelin, ha dhaqin ama ha ku badalin mashiinka la tuuro ...
Maaskarada ilaalinta N95 ee ay xaqiijisay FDA CE
[Nooca]: Nooca Nooca ah Foosha Nooca [Adeegsiga]: Ku xidho meel cidla ah oo qiiqa ha baabuurta, jikada, iwm. [Hawlaha]: Sifeeyn ah ugu nadiifi dhammaan nooc walxaha hawada ku jira. [Waxaan haynaa shahaadooyin] ： FDA / CE / Awooda qeyb ahaan ee NIOSH [Waqtiga]: wasakhaynta dhexdhexaad ah-40hours, Wasakheyn dhexdhexaad ah-30hours, Wasakhow culus-20hours, Wasakhow xun-8hours. [note]: 1. Haddii maskuusku uu waxyeelloobo, qoyan yahay ama uusan si tartiib ah u neefsanayn, fadlan si dhaqso ah ugu beddelo maaskaro. 2. Ha bedelin, ha maydhin ama ha is weydaarsanin ma ...
[Nooca]: GM1-AM GM1-BM [Adeegsiga]: Xidho huurka qiiqa iyo qiiqa baabuurta, jikada, iwm. [Hawlaha]: Sifeeyn ah ugu nadiifi dhammaan nooc walxaha hawada ku jira. La kulmo heerka GB / T 32610 -2016. [Waxaan haynaa shahaadooyin]: FDA / CE [Muddada]: wasakhaynta khafiifka ah-40hours, Wasakheyn dhexdhexaad ah-30hours, Wasakhow culus-20hours, Wasakhow xun-8hours. [note]: 1. Haddii maskuusku uu waxyeelloobo, qoyan yahay ama uusan si tartiib ah u neefsanayn, fadlan si dhaqso ah ugu beddelo maaskaro. 2. Ha beddelin, ha maydhin ama ha ku beddelan tuur-tuurka ...
Muuqaalka carruurta ee '9595 '